Tuesday, April 6, 2010 Satọde, 27 Juun 2015 Matt Chandler
Na imikpu mmetụta gị afo nwere ike n'ezie na-abịa site na ihe nchọgharị gị na. Elela anya ugbu a, mana Google na-ezube ịhapụ ngwa mgbakwunye ihe nchọgharị ga-enye ndị ọrụ ohere ịpụ na nyochara gị by Google Analytics.
Nke a na-eweta ọtụtụ ajụjụ na ihe nwere ike ịpụta maka webmasters na ndị na-ere ahịa weebụ ndị na-eji Google Analytics iji nyochaa okporo ụzọ weebụsaịtị, n'ụzọ bụ isi otu ojiji nke ngwa mgbakwunye ga-emetụta nchịkọta nke data okporo ụzọ saịtị. Nke a na - arịọ ajụjụ ọzọ dị mkpa karịa: gịnị kpatara Google ga - eji mee nke a mgbe Google Analytics anaghị achịkọta data nkeonwe?
Nke a na-etinye Google na udi nke ngụkọta ndị ihu abụọ ebe ha nwere ike idebe ndekọ na-enweghị njedebe nke akụkọ ọchụchọ ndị ọrụ? Ikekwe. Usoro ọchụchọ na-enye Google ohere ịnyepụta nsonaazụ ọchụchọ ahaziri iche dị ịtụnanya, yana ọ bụ ezie na ha emeela ka ọ dịkwuo mfe ịpụ na njirimara a na nke ha Ebe Nchekwa, ha anaghị aga n'ụzọ ọ bụla iji kpọsaa ohere a. Ọ na-ekwukwa na otu nzuzo rịọrọ Federal Trade Commission ka ha mepee nyocha na Google Buzz, ya mere Google nwere ike na-agba agba ntakịrị na nzuzo nzuzo.
Ọgba aghara adịla oke na profaịlụ di elu, ma mmeghachi omume mbụ m bụ Ya mere? Mmadu ole mara na ha nwere profaịlụ Google, ma ya fọdụ na ha nwere ike idezi profaịlụ a ma gbanwee ntọala nzuzo ha na mmasị ad ha? Enweghi m ike ịchọta data data ọ bụla, mana kedu ọnụọgụ nke ndị ọrụ weebụ na-eji ngwa mgbakwunye AdBlock Plus maka Firefox? O nwere ike ịbụ na ezughị oke iji tinye ya na mpụga ọkọlọtọ.
Isi okwu m bụ na maka webmasters na ndị na-ere ahịa, ngagharị a nwere ike ire ndị ọzọ ndenye aha Omniture na WebTrends dị ka ndị anyị nọ n'azụ ákwà mgbochi ahụ chọrọ ịnweta data dị ka o kwere mee. Mana mbugharị ahụ nwere ike bụrụ ihe ikpere ikpere nye nsogbu na-amalitebeghị ma nwekwaa ike ịdị.